Foam Tepi Yakateedzana Fekitori - China Foam Tepi Series Vagadziri, Vatengesi
Mvura yakamisikidzwa kraft bepa tepi yakagadzirwa ne kraft bepa base zvinhu uye yakaputirwa neinodyiwa chirimwa starch inonamira. Inonamira mushure mekudarika mvura. Iyo inochengetedza zvakatipoteredza uye haina-kusvibisa. Inogona kudzokororwa uye zvishandiswezve zviwanikwa. Kuchengetedza kwenguva refu kusamira pasina hunyoro.
VHB Foam Tepi
Shock kupinza yakasimba inonamira furo tepi
Chigadzirwa tsananguro Chigadzirwa zita Kugunun'una kwakasimba kunamatira furo tepi. Kureba Normal: 6.5y / 10y / 9m kana gadzirisa Hupamhi Kubva 6mm-1020mm Zvakajairwa: 12mm / 18mm / 24mm / 36mm / 48mm Kana gadzirisa Jumbo rwakapetwa upamhi 1020mm Kupaka Sechikumbiro chevatengi Sevhisi OEM Chitupa SGS / ROHS / ISO9001 / CE ...